Kati Taylor Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Kati Taylor
Kati anga ave mukushambadzira kwedhijitari kwemakore gumi nemaviri. Rake rekutanga basa rehunyanzvi kunze kwekoreji kwaive kubata maneja ekushambadzira emaimeri uye yemukati yekutengesa / yekuparadzira webhusaiti kune matatu makuru epasi rose mabrands. Kubva ipapo anotorwa pane zvinoenderana, zvinofambira mberi mabasa. At Yakakwidziridzwa Ekushambadzira Solutions, Kati inyanzvi yekushambadzira yedhijitari uye grafiki dhizaini.
Iyo COVID-19 Kubuda: Kushambadzira uye Kushambadzira Kukanganisa
Muvhuro, March 30, 2020 Chishanu, February 18, 2022 Kati Taylor
Zvakakosha zvakanyanya kushanda nesangano riri pamusoro pekukosha kwekushambadzira kushambadza nguva dzese. Sezvo bhizinesi rega rega riri kumanikidzwa kuita shanduko nekuda kwenzvimbo dzazvino dzepasi uye COVID-19 hutano nekuchengeteka, zvinoreva kupa hunyanzvi hwakawanda hwevashandi vari kure, kuenda kune zero zero masevhisi pazvinogoneka, nekusimbisa tsvimbo pamabhizimusi emari. Kwokushandisa mari yekushambadzira yakakosha panguva dzino. Mabhizinesi zvakare anofanirwa